Waxyaabaha qarsoon ee ciyaaraha kama dambaysta ah waa la xallin karaa - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Waxyaabaha qarsoon ee ciyaaraha kama dambaysta ah waa la xallin karaa - BGR
Waxyaabaha qarsoon ee ciyaaraha kama dambaysta ah waa la xallin karaa - BGR
Rakaabka: Dhamaan wuxuu maqnaa ku dhawaad ​​shan bilood hadda, laakiin waxaan sii wadnaa inaan helno waxyaabo cusub oo ku saabsan filimka ugu weyn sanadka - xaqiiqda taasi Endgame durba waxaa laga heli karaa dijitaalka iyo Blu-ray. Qaababka Ray ayaa sidoo kale daaha ka fayday faahfaahin cusub oo ku saabsan filimkii ugu yaabka badnaa ee Marvel ilaa maanta. Laakiin istuudiyaha ayaan wali sharixin dhammaan waxyaalaha qarsoon ee Endgame in kasta oo uu qabtay shaqo aad u wanaagsan wax ka qabashada waxyaabo badan oo laga yaabo inay ka yaabisay taageerayaasha. Haddii su'aal weli u baahan tahay in sharax laga bixiyo, kani waa halka uu Steve Rogers joogo. Waxaan dib u dhisey qayb ka mid ah jawaabta bilo kahor markaynu go’aansanay sannadka suurtagalka ah Steve wuxuu ku noqday Peggy Carter, laakiin taageere ayaa hada u dhaqaaqay masaafo dheeri ah si uu u bixiyo macluumaad dheeraad ah.
waqtiga macluumaadka oo dhan waan eegnay waxaa bixiyay Marvel ee qoob ka ciyaarkaan dhamaadka dhamaadka Endgame waxayna ku soo gabagabeeyeen in Steve ay ahayd inuu albaabka Peggy garaaco hal dhibic 1946. Markii ay halkaa joogeen, wuxuu u sii joogay si uu u guursado jacaylka noloshiisa oo ay isla wadaagaan, sidii ay jeclaan lahaayeen. Steve wuxuu abuuray xaalad kale oo u oggolaaneysa inuu ku noolaado nolosha uu had iyo jeer doonayay.
Tani waxay noo keenaysaa isticmaaleyaasha Reddit thanksredditformemes Ayaa u adeegsaday fiidiyow dhowaan laga soo diray banki . ] si loo xisaabiyo sanadka uu Steve soo laabtay waagii hore si uu u ciyaaro qoob ka ciyaarka.
Fiidiyowga kore, kooxda saameynta gaarka ah waxay yiraahdeen Cap wuxuu ahaa 106 da 'markii uu ku soo laabtay 2023 si uu Falcon gaashaanka cusub u siiyo oo uga dhigo Captain America cusub:
Cape wuxuu ku dhashay 1920. Wuxuu galay barafka sanadadii 1945 (25 sano)
Waxaa laga helay 2011 wuuna noolaa ilaa 2023. (12 sano jir)
Taasi waxay ka dhigeysaa Cap (kahor dhagaxyada bixinta) 37 sano
Taasi waxay ka dhigan tahay inuu ku qaatay 69 sano Peggy. (106 - 37)
Isagoo u malaynaya inuu ku soo laabtay Peggy 1947, si fiican 2 sano ka dib dhammaadkii dagaalka, wuxuu ku noolaan lahaa ilaa 2016 si kale. (2016 - 1947 = 69)
2016 waa sanadka dilkii Peggy (ee Captain America: Dagaalkii Sokeeye)
Tani waxay sidoo kale cadeyneysaa in Cape uu ku soo noqday safka ugu weyn wax yar ka hor safarkiisii ​​lama filaanka ahaa ee uu ku soo galay.
sharraxaad fudud oo macno leh marka loo eego macnaha ay bixisay Marvel dhammaadka Steve.
Sidaan kor ku soo sheegay, joogista Peggy waa go'aan abuuraya jadwal ka duwan kan Endgame . Marvel wuxuu xaqiijiyey inay tahay fasiraadda saxda ah ee waqtiga Steve ee safarka, kaas oo hadda ah canaan u ah MCU. Nooca ugufiican, dabcan, wuxuu ahaan lahaa inuu Steve guursado Peggy aduunkan, waana fikrad ay qorayaashu Endgame qaatay. Laakiin, sida Walaalaha Russo ayaa dhowr jeer sharxay Tani ma dhici karto iyada oo la tixgelinayo sida safarka waqtiga MCU u shaqeeyo.
Taasi waxay tidhi, wali ma ogin sababta uu Steve u sugayay sanadahan oo dhan inuu gaashaanka ugu celiyo jadwalka asalka ah. Haa, waxaa laga yaabaa inuu sugay ilaa Peggy ka baaba'o kahor inta uusan safrin waqti si loo hubiyo inuusan mar dambe lumin doonin. Laakiin sidee ku ogaatay inuu sii noolaan doono muddadaas dheer?
Jason Momoa wuxuu umuuqdaa in showga TV-ga "See" uu ka fiican yahay "Game of Thrones" - BGR